कति हुनुपर्छ उमेर अनुसार तौल ? हेर्नुहोस् – Idea Khabar
कति हुनुपर्छ उमेर अनुसार तौल ? हेर्नुहोस्
आइडिया खबर२०७८ जेष्ठ १६, आईतवार २२:००
टिप्प्स | चिकित्सकीय दुनियामा साधारणत: उमेर अनुसार तौल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । उदाहरणको लागि कुनै महिला गर्भवती छन् भने उनको पेटमा बढ्दै गरेको बच्चा हप्ता अनुसार कति बिकास भईरहेको छ हेर्ने गरिन्छ, जब बच्चा जन्मन्छ तब पनि बच्चा कति महिनामा कति तौलको भयो र तौल अनुसार कति स्वस्थ छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि बच्चा जन्मने बित्तिकै यति तौलको जन्मियो भन्ने रिपोर्ट दिने गरिन्छ । त्यसो त धेरै किलो तौलको बच्चालाई जन्म दिनेलाई पुरस्कृत समेत गर्ने चलन छ ।
१. भर्खर जन्मिएको बच्चा छोरा हो भने उसको तौल कम्तिमा पनि ३.३ केजी वा सो भन्दा माथि हुनु राम्रो मानिन्छ भने छोरी हो भने ३.२ केजी भन्दा माथि हुनुपर्छ । जन्मिँदा बच्चाको तौलबारे धेरै चर्चा हुनुको कारण स्वस्थता नै हो । राम्रो तौल लिएर जन्मिएको बच्चा हुर्काउन सजिलो हुन्छ भने जन्मिँदानै कम तौल भएको बच्चालाई जोगाउन मुश्किल हुन्छ । त्यसो बच्चामा कुनै समस्या वा बिरामीले छोएमा समस्या आई लाग्छ ।
२. यदी ३ देखि ५ महिनाको बच्चा हो भने उसको औशत तौल छोरा हो भने ६ केजीभन्दा बढी वा छोरा हो भने ५.४ केजीसम्म हुनुपर्छ । यदी औशत तौल भन्दा कम भएमा आमाले बिशेष पौष्टिक आहार तथा बच्चाको स्याहार सुसारमा ध्यान दिनु पर्दछ । पौष्टिक आहारले बच्चालाई सारिरीक बिकासमा ध्यान दिन्छ । सन्तुलित तौल भएन भने त्यसै अनुसार आहारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
३. यदी ६ बर्षदेखि ८ महिनाको छोरा हो भने उसको तौल कम्तिमा ७.८ केजी हुनुपर्छ भने छोरीको तौल ७.२ वा सो भन्दा बढी हुनुपर्छ । तौलको कमिको कारण रोगले आक्रमण गर्ने, बढी बिरामी हुने खाना नपच्ने जस्ता अनगिन्ती समस्या आउनेगर्छ । समस्या बल्झिएपछी जति ध्यान दिँदा पनि समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले बच्चाको उमेर अनुसार तौल औशतमा राख्नुपर्छ ।
यहाँ हामीले १८ बर्षसम्मको उमेरमा हुने औशत तौल बारे जानकारी दियौं । नेपालीहरुको १८ बर्षदेखि माथि ४० बर्षसम्मको औशत तौल ६० देखि ८५ सम्म हुनु स्वस्थनै मानिन्छ । कसैको सारीरिक बनौट अनुसार तौल बढी हुनु अस्वस्थ भन्न मिल्दैन तर अस्वभाविक मोटाउनु, पेट लागेर तौल बढ्नु, हिड्दा वा कुनै काम गर्दा छिटो थाक्नु जस्ता अवस्थामा अस्वस्थता हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा खानपान र ब्यायाममा ध्यान दिनुनै उपयुक्त हुन्छ ।
मानिसको उमेर अनुसार ४० बर्षदेखि ६० बर्षसम्मको उमेरमा पनि स्थिर तौल हुनुपर्छ । तर त्यसपछि भने तौल क्रमश घट्दै जान्छ । बुढेसकालमा पनि नियमित ब्यायाम र खानपानमा ध्यान दिने हो भने स्वस्थ भइन्छ । तर उमेर अनुसार रोगसँग लड्ने शक्ति र सारीरिक शक्तिमा समेत ह्रास आउने हुँदा स्वभाविक रुपमा तौल घट्दै जान्छ ।
२०७६ माघ १३, सोमबार ०७:०२